Ịzụta Mibolerone ntụ ntụ (3704-9-4) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Trenbolone ntụ ntụ Usoro / Ntụ ntụ Mibolerone (3704-9-4)
SKU: 3704-9-4. Categories: Trenbolone ntụ ntụ Usoro, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Mibolerone ntụ (3704-9-4), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Mibolerone ntụ ntụ isi agwa
Mbolerone ntụ ntụ
Aha aha: dimethylnortestosterone, Mabolerone ntụ ntụ
Aha ndị ọzọ: Lelee nkwụsịtụ, Matenon, Mibolerone ntụ ntụ, Lelee lelee ntụ ntụ, CDB-904, 3704-9-4
Mibolerone ntụ ntụ Usage
Ebumnuche nke steroid a bụ ịme ka nkwụsị nke nwanyị nkịta kwụsị iji gbochie ime ime. Dị ka ọtụtụ hormonụ steroid, nke a na-agụnye ọkwa ọgwụ anụmanụ, ọ dịghị anya mgbe ọ kwụsịrị na ndị na-eme egwuregwu na ndị bodybuilders chọtara ojiji.
Lelee nkedo bụ otu n'ime ihe ndị nwere ike anabolic steroid. Ọ bụkwa otu n'ime nsogbu ndị nwere nsogbu kachasị emetụ n'ahụ kpatara. Nke a abụghị onye steroid nke ndị novice bodybuilders ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu na-ejikarị eme ihe. Ị ga-ahụkarị iji ya eme ihe n'ememme ọgụ tupu ịlụ agha. Ụfọdụ bodybuilders ga-eji ya tupu ịlụ ọgụ iji nyere aka n'izu ikpeazụ ma ọ bụ na oge mgbapụta maka ntinye ọzọ, mana ọ bụghị ụbụrụ na-ahụkarị nke na-ahụkarị. Anyị ga-aghọta na enweghị ọgwụ na steroid a na-eme ka ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ozuzo na-eme ka anyị na-aga n'ihu.
Kedu ihe nyocha nke Mibolerone ntụ ntụ
Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-eji 5mgs banyere 30min tupu ọzụzụ ma ọ bụ asọmpi. Ọ dịghị ihe ọ bụla "na-akwakọba" ma ọ bụghị cardinal. A na-ejikarị ya eme tupu ọzụzụ ọzụzụ dị mkpa ma ọ bụ asọmpi. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-eji ụbụrụ steroid eme ihe na-agbakwụnye dị ka nkwalite ihe omume.
Lelee nkwụsịtụ na-eji ọnụ ekwu okwu ma na-aghaghị ime kwa ụbọchị. Ngwongwo na-adaba na 200-300mcg kwa ụbọchị kama ọ nwere ike ịbawanye na 500mcg kwa ụbọchị na ụfọdụ. A na-ebute ihe mgbe niile tupu ọzụzụ, dịka 30-40 nkeji tupu ọzụzụ, ọgụ ma ọ bụ ihe omume. E nweghị usoro ọgwụgwọ a na-atụ aro ka a ghara iji ọgwụ steroid a mee ihe maka nzube ụmụ mmadụ.
Otú Mibolerone ntụ si arụ ọrụ
Lelee nkedo bụ ịkwado mmiri nke steroid Mibolerone ntụ (CAS 3704-9-4), nke ndị na-emepụta ihe, ndị na-arụ ọrụ ike, ndị na-eme egwuregwu ike na ndị agha na-eji eme ihe, na-eme ka ịlụso ọgụ na arụmọrụ n'ụbọchị mpi. Leba anya na mmiri dị irè mgbe eji nanị 30 nkeji tupu asọmpi. Onye ọrụ ahụ ga-enwe mmesapụ ụba, ileba anya na ịsọ asọmpi. Ọ bụ ezie na steroid a enweghị ihe ọ bụla na-akpali akpali, ọ na-egosipụta ihe dị ịrịba ama na CNS (Central Nervous System) site na ụdị ụdị androgen. Nke a bụ naanị ihe mere ndị eji eme egwuregwu ji eji ọgwụ a eme ihe, ebe ọ bụ na ọgwụ ndị a na-enweghị ike ịghọta ya.
Enweghi ihe obula nke bu ihe omuma ma o bu ndi ozo na-eji nyocha elele anya na "okirikiri" dika otutu ihe ndi ozo. O yiri ka onye steroid a agbanyewo nkwenye siri ike dị ka ihe na-eme ihe na-egosi na ị ga-enwe mmeri na ịsọ asọmpi. Otú ọ dị, enweghị uru dị ukwuu na ngwongwo muscle nwere ike nweta na ọgwụ a n'ihi eziokwu ahụ nwere ike iji ya na obere oge 2, na obere 5mg doses. Oge ọ bụla dị na ya, ma ọ bụ ọgwụ dị arọ, na nchegbu ahụike dị nso.
Ihe dị mkpa: Ngwọta nke anụ ọkụkụ ekwughị na e mebiri ya na Hypothalamic-Pituitary-Testicular-Axis nakwa na ọ bụghị tupu ọnọdụ ala dị ala.
• Hepatotoxicity: Dịka ihe niile C17-aa anabolic steroid Gaa na-eleba anya na-egbu egbu na imeju. Ọnụ ọgụgụ na mkpa nke toxicity site na otu C17-aa steroid na-esote dịgasị iche iche dị ukwuu; ụfọdụ ndị na-egbu egbu kama dị nwayọọ, ma nke a abụghị nke dị nwayọọ. Lelee nkedo nwere ike inwe otu n'ime ihe kachasị ike, mmetụta ọjọọ na ume enzymes niile nke C17-aa steroid. Ụkpụrụ imeju ga-amụba n'ụzọ dị ukwuu na otutu nsogbu ga-etinye na imeju.
Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa imeju, ị gaghị eji steroid a. A ghaghị idebe ya naanị 2-3 n'izu max ma gharakwa iji ya na C17-aa steroid. A ghaghị izere ọgwụ ndị na-edozi ahụ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na ọtụtụ ndị na-egbu egbu ma nke a ga-eme ka ọnyà imeju dịkwuo. Ọ dịkwa mkpa na onye ọrụ ahụ na-aṅụ ịṅụ mmanya mgbe eji ya na mgbakwunye ya na ndị ọcha. Ịghara ime ihe ndị a nwere ike ịkpata nsogbu imeju, na ụfọdụ ndị ọrụ nrụgide nwere ike ịdị ukwuu ọbụna mgbe ị na-eme ihe niile.
Mibolerone ntụ ntụ Marketing
Mpolerone ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
Mmetụta ndị dị na Check Drops dị ọtụtụ. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị ize ndụ nke steroid nwere. N'ihi na mmetụta ndị dị na Check Drops dị ike nke a abụghị onye steroid onye ọ bụla kwesịrị iji ya mee ihe n'ezie. Enwere ọtụtụ nhọrọ dị mma. Mkpesa ahụ na-ebuwanye ibu na-ekwu tupu agha enwee ike ịnwale, mana ihe ize ndụ ga-eme ka ọ ghara ịba uru na steroid a. Nke a apụtaghị na onye ahụ ga - anwụ, ọ ga - ekwekwa maka mmetụta ndị dị na Check Check ka a zere ya ruo n'ókè (a pụghị izere ha kpamkpam).
Estrogenic: Emetere Estrogenic ma ọ bụ Lelee nkwụsịtụ dị mfe dịka steroid a bụ progestin ma kwadoo ya. Mmetụta ndị dị na Check Drops nwere ike ịgụnye gynecomastia, njigide mmiri na ọbara mgbali elu nke metụtara njigide mmiri siri ike. Otú ọ dị, ọ bụ n'ihi na ọ bụ obere oge na-adị obere ma na-eji ya eme ihe dị ntakịrị (ọ na-ewe ntakịrị Mibolerone ntụ ntụ iji mekwuo mmeri).
Ojiji ndị na-eme ihe ngosi Aromatase (AI) dị ka Anastrozole (Arimidex) nwere ike ichebe megide mmetụta nke estrogenic nke Check Drops. Nke a ga-enye nchebe site na estrogen na progesterone metụtara. Otú ọ dị, ọrụ estrogenic siri ike ọ ga-ekwe omume na nsogbu ka dị n'ime ụfọdụ ndị nwoke.
Androgenic: Mmetụta dị na Androgenic nke nchọpụta na-eleba anya nwere ike ịgụnye ihe otutu, ntutu ntutu isi na ntutu isi na ụmụ nwoke na-atụ anya ịcha mma nwoke. Mmetụta mmetụta nke androgenic nke Check Drops nwere ike ịgụnye mgbaàmà ndị na-eme ka ụmụ nwanyị ghara ịchọta ụmụ nwanyị; n'eziokwu, ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ị
Akwukwo obi: Mmetụta a na - emetuta nke Check Drops nwere ike ịgụnye ndị nwere ọrịa obi siri ike. Onye na-agwọ ọrịa a nwere ike ịdị nnọọ njọ na cholesterol na mgbali elu ọbara. O nwere ike inwe mmetụta dị ịrịba ama na cholesterol HDL (ezigbo cholesterol) na LDL cholesterol (cholesterol ọjọọ). Ọ bụrụ na onye ahụ nwere ọnọdụ obi obi ọ bụla, n'oge gara aga ma ọ bụ ugbu a, ọ gaghị eji steroid a.
Ndị na - eji steroid a ga - achọ ijide n'aka na ha na - ebi ndụ enyi na enyi. Nri nri siri ike nke omega acids bara uru na obere na abụba zuru oke na shuga dị mfe dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ gaghị abụ akụkụ nke usoro ọgwụgwọ a, ọ bụghị maka gị. Ndị ọrụ kwesịrị ịgbakwunye na antioxidant cholesterol ma legide anya na ahụ ike ha.
• Testosterone: Lelee nkwụsịtụ ga-egbochi mmepụta nke testosterone gị ma mee ya nke ọma. Ojiji nke testosterone dị oke mkpa dị mkpa ọ bụrụ na a ga-ezere ala testosterone dị ala. Ọ bụ ezie na ojiji dị mkpụmkpụ na-adị ndụ na steroid a, ogologo oge eji eme ihe agaghị egbochi mmebi nke testosterone nke ọrịa steroid na-eme ma ọ bụghị mkpụrụ ndụ nke onye ahụ.
Ozugbo ojiji nke steroid a kwụsịrị ma ndị steroid niile edozila usoro ahụ, mmepụta nke testosterone ga-amalite ọzọ. Otú ọ dị, a na-atụ aro ka a gwọọ Cycle Treatment (PCT). Nke a ga - eme ka mgbake dị; ọ gaghị ekwe nkwa na ọ gaghị emezue ya, ma ọ ga-eme ka nsogbu nke mgbake dị mma. Dị ka ndị na-agwọ ọrịa ọ bụla, enwere ike ịnweta mgbake kpamkpam, a ga-atụle nke a tupu iji amalite.
Ụzọ ịzụta Mibolerone ntụ ntụ si AASraw
Mibolerone ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
1 nyochaa maka Mibolerone ntụ ntụ (3704-9-4)
Mibolerone ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi